मनकामना स्मार्ट लघुवित्त आइपियो बाँडफाँट कहिले ? यस्तो आयो सुचना – OnlinePahar
मनकामना स्मार्ट लघुवित्त आइपियो बाँडफाँट कहिले ? यस्तो आयो सुचना
२८ माघ २०७७, बुधबार ११:५७ Basanta Khanal	0 Comments	#IPO_Result
मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) बाँडफाँट कहिले होला भन्ने लगानीकर्ताको चासो रहेको छ। आज हामीले आइपियो बाँडफाँट सम्बन्धि जानकारी लिएर आएका छौ। उक्त आइपियोमा मा २० लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्। आइपियो वेरिफाईको काम सकिने लगतै १ साता भित्र बाँडफाँट हुने भएको छ। उक्त आइपियोमा मागभन्दा बढी आवेदन परेको हुनाले गोलाप्रथा बाट बाँडफाँट गरिने छ।उक्त २० लाख २६ हजार २४५ जनाको आवेदन परेको छ। यो मागभन्दा ७३ गुणा बढी भएको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलले जनाएको छ। यही असार १७ गतेबाट खुला भएको आइपिओ सोमबार सकिएको छ।
क्यापिटलका अनुसार उक्त आवेदनबाट दुई अर्ब ६५ करोड ७४ लाख ५० हजार कित्ता शेयर माग भएको छ। संस्थाले सर्वसाधारणका लागि ३ लाख ३६ हजार ४९२ कित्ता शेयर मात्रै बिक्री गरेको थियो। लघुवित्तको आइपिओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाट निर्देशिका अनुसार बाँडफाँट हुने बताइएको छ। निर्देशिका अनुसार गोलाप्रथाबाट न्यूनतम १० कित्ता बाँडफाट गर्दा ३६ हजार ३४९ जनाले मात्रै लघुवित्तको शेयर पाउने छन्। त्यस अनुसार ९८.१० प्रतिशतभन्दा धेरैले शेयर नपाउने देखिएका छन्। हालसम्म प्राप्त तथ्याङ्क पूर्ण नरहेकाले लघुवित्तको आइपिओ आवेदन गर्नेको सङ्ख्या अझै थप हुन सक्ने क्यापिटलले जनाएको छ। तीन करोड ८९ लाख बराबरको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिएको संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवसिंह विष्टले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रतिकित्ता १०० अङ्कित दरका तीन लाख ८९ हजार ४९२ कित्ता साधारण शेयर बिक्री खुला भएको छ। तीमध्ये जारी पुँजीको ०.५ प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ४५० कित्ता शेयर सामूहिक लगानीका लागि र ६ हजार ५८ कित्ता कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी रहेका तीन लाख ६३ हजार ४९२ कित्ताको लागि सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। उक्त सेयर इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम एक हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। रासस
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – २५ आषाढ २०७८ शुक्रवारको राशिफल पढौं
राजस्व उठ्ने क्रम बढदै, दैनिक ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व उठ्दै →